Android dia mahazo sary famantarana sy marika vaovao hanamboarana lalana amin'ilay kinova vaovao | Famoronana an-tserasera
Google dia naka fotoana fohy hampianarana amin'ny horonan-tsary ny tsipika famolavolana vaovao izay ho fivoaran'ny Android manaraka. Horonantsary iray mampiseho ny loko paleta sy torolalana manan-danja kokoa hahafantarana hoe hanao ahoana ity OS ity mandritra ny taona vitsivitsy.
Mampahafantatra azy ireo koa izy ireo fa hanao izany asongadino ny loko hampiavaka azy toy ny fiteny famolavolana amin'ny fampiharana, vahaolana ary rafitra fiasa, ary koa ny fanehoana ny lokon'ilay paleta voafantina tena tsara.
Ny fotoana farany nahazoanao fanavaozana tamin'ny logo sy ny famolavolana marika dia tamin'ny 2014. Amin'ity taona ity izay ampidirina endrika maoderina kokoa ary tsy hadino ny saribakoly android namany.
Ny famolavolana logo dia entanin'ny robot Android, iray izay an'ny fiarahamonina ary izany no tandindon'ity rafitra miasa ity izay androany no be mpametraka indrindra eto ambonin'ny planeta. Io ilay robot izay manana toerana manokana ao amin'ny sary famantaranao.
Nisy izany nanova ny logo avy amin'ny maitso ka hatramin'ny mainty ary ny antony dia satria hita mazava kokoa amin'ny famakiana toy izao. Rehefa avy nilaza ny loko, hoe hitantsika ilay robot dia midika koa fa hanomboka hanome elatra ny fanaingoana amin'ny rafitra fiasan'izy ireo miaraka amin'ity kinova Android 10 manaraka ity izy ireo; izay raha ny fanazavana, tsy ho voatonona anarana tsindrin-tsakafo toy ny teo aloha intsony.
Ao amin'ny horonan-tsary zarainay Azonao atao ny mahita ampahany amin'ny asa amin'ny fanavaozana ny sary famantarana ary ny palette miloko izay hampiasaina amin'ny taona ho avy. Ny marina dia mandanjalanja tokoa izy ary manaraka ny torolàlana momba ny fiteny famolavolana hitan'ny G lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Aza adino ny fomba nanamboaran'i Google ny lohahevitra maizina ho an'ny fanavaozana vaovao an'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity no endrika vaovao amin'ny marika Android